IZINKULUNGWANE ZISALE DENGWANE ISIPHEPHO U-ELOISE SICEKELE PHANSI I-LIMPOPO | Scrolla Izindaba
IZINKULUNGWANE ZISALE DENGWANE ISIPHEPHO U-ELOISE SICEKELE PHANSI I-LIMPOPO
Izinkulungwane zabahlali base-Tshakhuma, Nzhelele kanye nemizana eyakhele i-Vhembe, e-Limpopo basale dengwane ngemuva kokuthi iSiphepho u-Eloise sihlasele izin1dawo zabo ngezikhathi zasekuseni ngeSonto.
Izimvula ezinamandla ezihambisana nemimoya enamandla zishiye abaningi betatazela futhi beshiya namakhaya abo nangemuva kokuxwayiswa ukuthi bangakwenzi lokho.
Izihlahla bezisiphuka phansi ngesikhathi amabhuloho nemigwaqo kugcwele kuchichima. Izindlu nezimoto nakho bekucwile ngaphansi kwamanzi.
Yize izakhamuzi zaxwayiswa ukuthi zihlale ezindlini, zigweme ukuwela imifula, imigwaqo egcwele amanzi namabhuloho asezingeni eliphansi, abantu basemakhaya abavela ezindaweni ezithintekile banqume ukushiya amakhaya abo ngeSonto ekuseni ukuze basindise izimpilo zabo.
UTshifhiwa Neguda oneminyaka engama-33, uthe imvula ibaphoqe ukuba bashiye ikhaya labo.
“Besicabanga ukuthi sizophepha emakhaya ethu, kanti bekungenjalo. Uphahla luqale ukuvuza futhi amanzi angena ngomnyango. Yilapho-ke esithathe isinqumo sokuthi sithathe ezinye zezinto zethu ezibalulekile siye endaweni ephephile,” kusho uTshifhiwa.
Okhulumela uMasipala wesiFunda i-Vhembe, uMnuz Moses Shibambu, uthe abezokutakula bamatasa basiza imindeni ngamaphasela okudla namatende.
Khonamanjalo e-Mozambique, kubikwa ukuthi kushone abantu abayishumi okubalwa nengane, kwathi abantu abayizinkulungwane eziyikhulu namashumi ayisithupha bathintekile ngemuva kokuba kufike Isiphepho u-Eloise ezweni.
Iningi lezisulu libulawe yizihlahla eziwayo, kusho iziphathimandla zase-Mozambique.
Indawo eshayeke kakhulu isemtateni wakuleli lizwe i-Beira lapho ebekucwile khona izimoto kwacekeleka phansi nemizi ezintatha zangoMgqibelo.
I-South African Weather Service (SAWS) ikhiphe isexwayiso semvula ephazamisayo njengoba bekulindeleke ukuthi Isiphepho u-Eloise sihlasele i-Mozambique siwele umngcele wase-Zimbabwe nowase- Limpopo ngezikhathi zasekuseni ngeSonto. Abakwa-SAWS baxwayise ngobungozi obusezingeni eliphezulu nge-orange alert level 9.
Izindonga zamanye amabhilidi ziwele phansi. Amandla kagesi avaliwe ngesikhathi isiphepho sonakalisa izintambo zikagesi futhi siphula nezigxobo ezithile zikagesi. Ngokwe-World Meteorologist Organisation, lesi siphepho sesiphelelwe ngamandla.
I-Mozambique National Institute of Meteorology nayo ithe iSifundazwe sase-Sofala esihlanganisa ne-Beira sesibone imvula engamamilimitha angamakhulu amabili nemimoya yamakhilomitha ayikhulu namashumi amahlanu ngehora futhi kungenzeka ibone amanye amamilimitha ayikhulu emvula emahoreni angama-24 alandelayo.
ISiphepho u-Eloise sihlasele i-Mozambique njengoba izwe belisazama ukubuyisa umthelela omubi weSishingishane u-Idai naso esidale umonakalo omkhulu sabulala abantu abangaphezu kwezinkulungwane ngoNdasa kowe-2019. I-Beira inendawo yasemtateni ebaluleke kakhulu e-Mozambique.
Izimoto bezicwiliswe ngaphansi kwamanzi kanti ezinye zilinyazwe yisiphepho u-Eloise e-Beira, e-Mozambique.
Imigwaqo ibigcwele amanzi kanti ezinye izindonga zezakhiwo nazo bezicwila.